Degaanka Qalan-qale oo Dagaal beeleed dib uga bilowday - Awdinle Online
Degaanka Qalan-qale oo Dagaal beeleed dib uga bilowday
Wararka naga Soo gaaraya Degaanka Qalan-qale ee Waqooyiga Gobolka Galgaduud ayaa Sheegaya in goordhow dib uga bilowday dagaal beeleed u dhaxeeya labo maleeshiyo beeleed, kuwaasoo degaankaasi ku dagaallamayay Saacadihii lasoo dhaafay.
Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleystay in ay joojiyaan dagaalkii degaanka Xananbuure, waxaana hada ay kusoo jeedaan degaanka uu dagaalku ka socdo.
Qaar ka mid ah dadka degaanka ayaa Risaala u sheegay in dagaalka uu yahay hadda Mid xooggan,islamarkaana maleeshiyaadka hubeysan ay dagaallamayeen Saacaddihii lasoo dhaafay.
Ku dhawaad 10 ruux la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dagaal beeleedka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen dagaalkii shalay.
Dhinacyada dagaalamaya oo mudaba is hor fadhiyay ayaa isku haya baraago laga qoday dhul miyi ah oo deegaankan hoostaga taasi oo xalkeeda dhowr jeer lagu guul dareestay .
Dhinaca kale waxaa degan xaaladda deegaanka Xananbuure ee Gobolka Galgaduud oo uu dagaal ku dhexmaray laba Maleeshiyo beeleed, waxaana halkaas ku dhintay 11 qof, halka 25 qof kalena ay ku dhaawacmeen.
Previous articleTrump “Cid kasta oo taallooyinka dalkeena waxyeello u geysata xabsi ayuu muteysan doonaa “
Next articleFaallo:DIGIL IYO MIRIFLE OO KU DULMAN AWOOD QEYBSIGA DALKA EE 4.5 .